Su'aalaha La Weydiiyo - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Q1: MA U BAAHANAHAY IN AAN SIIYO ADEEGA ADEEGA BUUXINTA?
-> Miyaad ku maqantahay dibadda Shiinaha laakiin waxaad kahelaysa Shiinaha?
-> Ma u baahan tahay taageero isgaarsiineed oo aad la yeelato soo saarayaasha Shiinaha?
-> Miyaad ku jahwareersan tahay shaqooyinka bakhaarada iyo saadka?
-> Ma waxaad raadineysaa adeeg la awoodi karo?
-> Ma rabtaa inaad ka kordhiso mugga 10 ilaa 10,000 bishiiba?
Hadday haa tahay, markaa Sunsonexpress fulintu waa xalka xigmadda kuu ah.
S2: GOORMA AYAY AHAYD WAQTIGA SAXDA AH EE LAGU BAAHAN YAHAY IN LA BUUxiyo?
Macno malahan inaad tahay shirkad bilow ah ama shirkad qaan gaar ah, haddii aad ogaatay inaad ku jahwareersan tahay howlaha bakhaarka, qiimaha bakhaarka (oo ay ku jiraan kharashka shaqada iyo sidoo kale kirada), gaar ahaan markay shaqaalahaagu si adag u shaqeeyaan maalin dhan laakiin ay weli dib u laaban yihiin amarada, iyo waliba intaa dheer ma lihid waqti aad diirada saarto ganacsigaaga iibinta, markaa waa waqtigii la ogaan lahaa inaad ubaahantahay inaad amarkaaga fuliso oo aad fiiro gaar ah u yeelatid waxa ugu muhiimsan - ganacsiga. Bixinta fulinta amarku waa go'aan istiraatiiji ah oo macno u sameynaya kobaca ganacsiga. Mar kasta oo mugga amarkaagu ka bato waxa aad qaban karto, fadlan la soo xiriir Sunsonexpress Fulin wuxuu filayaa oo ka wada hadla sidii aan kaaga caawin lahayn kobcinta ganacsigaaga iyo sumcaddaada. Waxaan leenahay khibrad hodan ah oo ku saabsan iibka ganacsiga e-ganacsiga ee xuduudaha iyo sidoo kale saadka kaas oo runtii ka caawin kara ganacsigaaga heer kale.
S3: SIDEE LOOGA DOORANAA SHIRKADDA BULSHADA SAXDA AH?
Markaad raadineyso inaad bixiso adeegyo fulin ah, waxaad u baahan doontaa inaad tixgeliso arrimahan:
Qaabdhismeedka Qiimeynta: Tixgeli nooca walxaha (cabbirka, culeyska, qeybta wax soo saarka iwm) ee aad iibineyso iyo waxa miisaaniyaddaada fulinaya maadaama aad u baahan tahay inaad bixiso khidmadaha ku saleysan cabirka iyo miisaanka waxyaabaha la soo dirayo. Oo waliba waxaad ubaahantahay inaad ogaato waxa kubaxaya kaydinta alaabada iyo soo qaadashada iyo xirxirashada alaabtaada. Lacag kasta oo qarsoon iyo qandaraas muddo dheer ah iwm.
Ikhtiyaarada Shipping: Haddii aad caalami ahaan u iibiso, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in shirkadda fulintu ay awood u leedahay inay u soo dirto caalami ahaan.
Goobta Bakhaarka: Hubi in xarunta fulintu ay ku taal aagagga “midig” maadaama aad u baahan tahay in alaabtaada ay soo ururiso shirkadda fulintu ama ay u soo dirto soo-saaraha iyada oo qiime jaban. Sidoo kale haddii goobta bakhaarka ay ku dhowdahay garoonka diyaaradaha, taasi waa faa iido weyn in la diyaariyo gaarsiin deg deg ah si loo joojiyo macaamiisha.
Taageerada Macaamiisha: Marka wax qaldamaan inta lagu jiro amarka, fulinta iyo gudbinta, waxaad jeceshahay inaad qof la hadasho oo aad maciinsato taageero, tani waa adeegga aasaasiga ah ee ay tahay in la bixiyo. Sidoo kale, haddii shirkadda fulintu ay bixin karto adeegga iibka kadib si loo joojiyo macaamilka (tusaale. Amarada la socoshada) adiga oo adiga ku matalaya, taasi waa faa iidada ugu muhiimsan ee aad ku heli karto adeeg bilaash ah oo dhib badan.
Isdhexgalka: Maaddaama aad isticmaaleyso adeeg bixiye 3aad, iska hubi haddii nidaamkoodu horey u dhexgalay ama uu si hoose ula qabsanayay nidaamyada aad hadda jirtay sida webstore-kaaga, suuqyada sida Amazon, ERP, ama barnaamijyo kale. Sidoo kale waa inay fiicnaataa haddii ay u oggolaato inay yeelato aragti dhammaystiran oo ku saabsan kormeerka agabka iyo habsami u socodka waqti kasta iyo meel kasta.
Dhammaan qodobbada muhiimka ah ee kor ku xusan waa qayb ka mid ah adeegga fulinta Sunsonexpress la bixiyay.
Q4: MA KA HELI KARAA MACLUUMAADKA XISAABTA EE WAQTI-KU SAABSAN WEB?
Haa. Nidaamka Sunsonexpress wuxuu u oggolaanayaa dhammaan isticmaaleyaasha 24/7 macluumaadka waqtiga dhabta ah iyo sidoo kale xakameyn buuxda oo ku saabsan agabka iyo maaraynta nidaamka.
Q5: Adeeg noocee ah ayaad bixin kartaa?
Waxaan bixinnaa adeegyo kala duwan oo aan aaminsanahay inaan ku qancin karno baahiyahaaga kala duwan ee ku saabsan silsiladda wax lagu soo iibsado.
1. Adeegga Fulinta ee Bakhaarka waxaa ka mid ah helitaanka, keydinta, soo qaadashada & xirmada.
Adeegga maraakiibta adduunka ee ka socda Shiinaha ee loo maro adeegyada Boostada, adeegyada waaweyn ee caalamiga ee Express, khadkeenna is-horumarsan ee is-huwan, khadadka maraakiibta FBA, adeegga gudbinta xamuulka, Maraakiibta hawada, adeegga wakaaladda maraakiibta
Kaalmada markabku wuxuu ka kooban yahay dib u buuxinta, xoojinta, calaamadeynta, isku imaatinka, iwm.
Adeegga 4Add-on: xirmo, sumadaynta, is-dhexgalka webstore.
5.Waxay soo saartaa dhadhaminta iyo iibsashada.
6.Waa wakiilka lacag bixinta ee alaabtaada.
S6: Bakhaarkeenu ma nabad baa? Miyaan ku siinaa caymis alaabada ku jirta bakhaarkeena?
Alaabooyin badan oo aan gacanta ku hayno ama aan hayno, ma awoodi karno inaan waayno.
Bakhaarkayagu wuxuu ku qalabeysan yahay nidaamyo dab xakamayn ah iyo sidoo kale ilaalin 24 saac ah iyo marin u helid kontorool ah si loo hubiyo badbaadada alaabadaada. Shaqaalaheena bakhaarka khibrada leh ayaa hirgaliyay hanaan wax lagu duubay oo sifeyn ah si looga hortago in alaabku lumaan ama waxyeelo gaaraan inta hawshu socoto. Dhacdooyinka dhifka ah ee alaabooyinka lumay ama waxyeelloobeen, alaabadaadu had iyo jeer waxay caymis ku yihiin qiimaha badeecada. Khidmadda caymiska waa 0.1% ee "Qiimaha Waxsoosaarka" (qiimaha dhabta ah) ee alaabtaada sannad kasta.
S7 ： Ma aqbali kartaa rarka badeecadaha xasaasiga ah?
Haa, waan aqbali karnaa rarka batteriga, dareeraha, waxyaabaha la isku qurxiyo, budada, iwm.
S8 ： Sideen ku bixin karaa khidmadda dhoofinta ama kharashyada kale ee adeegga? Miyaan lacag sii bixiyaa?
Haa, waxaad u baahan tahay inaad horay u sii bixiso khidmadahaas. Waxaad noogu samayn kartaa lacag bixin xawaalad, xawilaad bangi, silig ku wareejin, kaarka amaahda, PayPal iwm Markaad hesho lacagtaada, koontadaada nala socota waxaa lagu xisaabinayaa isla qaddarka. Ka dib, si toos ah ayaan uga goyn doonnaa akoonkaaga markasta oo aan kuu soo dirno xirmooyin ama aan kuu siino adeegyo. Si looga fogaado dib u dhaca shixnadaha iyo adeegyada, waa masuuliyadaada inaad hubiso inay jiraan lacag ku filan koontadaada. Waad gali kartaa nidaamkayaga si aad u aragto faahfaahinta macaamil ganacsi iyo dheelitirka koontadaada.
Q9 ： Ma iga caawin kartaa inaad wax ka iibsato iibiyaasha Shiinaha?
Waan ognahay in iibiyaasha Shiinaha qaarkood aysan aqbalin lacagaha shisheeye. Sunsonexpress waxay ku siin kartaa adeeg "dukaameysi shaqsiyeed", way ku dalban kartaa oo way ku bixin kartaa lacagtaada.
Waxaan sidoo kale ognahay in qaar ka mid ah iibiyeyaasha Shiinuhu aysan badeecooyin u rarneyn meel ka baxsan Shiinaha Sunsonexpress waxay ku siin kartaa adeeg gudbinta alaab shaqsiyadeed oo aad ka iibsato boggaga internetka ee Shiinaha. Fadlan nala soo xiriir email ahaan: Andy@sunsonexpress.com
Q10 ： Isku dar xirmooyin badan una gudbi hal xirmo?
Sunsonexpress waxay bixisaa adeeg isku dhaf ah. Haddii aad wax ka iibsaneyso alaab-qeybiyeyaal kala duwan, Waan sugi karnaa dhammaantood inay yimaadaan ka dibna waxaan ku rarnaa hal sanduuq.
S11 ： Sidee wax loo bixiyaa?
Ma soo dirno qaan-sheegasho ka dibna sugno lacagtaada. Waxaan isticmaalnaa nidaamka lacag bixinta. Lacagta waad ku shubi kartaa koontadaada Sunsonexpress nidaamkeenuna si otomaatig ah ayuu kaaga goyn doonaa lacagaha koontadaada. Waad xaqiijin kartaa dhammaan macaamillada lacageed markaad gasho Xarunteena Isticmaalaha. Hadhaaga ku hadhay koontadaada ayaa loo isticmaali doonaa macaamilladaada mustaqbalka. Waa masuuliyadaada inaad hubiso sanduuq ku filan si looga fogaado carqaladeynta adeegga. Waad ku shuban kartaa koontadaada adoo adeegsanaya PayPal. Si ammaan ah u soo gudbiso lacag bixinta,
Waxaa jira laba qaab oo aad adigu ku bixin karto khidmadaha / koontadaada koontadaada:
1.Xawilaadda Bangiga: Fadlan kahadal Aqoonsigaaga Isticmaalaha ee Sunsonexpress marka aad ku shubaneyso Xawilaadda Bangiga, si aan u aqoonsanno lacagtaada iyo ugu xisaabinno koontadaada si waafaqsan.
Koontada 'PayPal' Fadlan si toos ah lacag ugu dhig nidaamkayaga. Nidaamkeenu wuxuu ku xisaabtami doonaa koontadaada RMB inta dhabta ah ee la helay. Fadlan la soco in khidmadda lacag bixinta ee PayPal marka aad lacagta noo soo gudbiso. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka jari doonnaa lacag dhan 2,5% lacagta sarrifka ee dhammaan lacagaha qalaad marka laga reebo HKD.
3.Qofkasta. Fadlan si toos ah lacagta ugu dhig nidaamkayaga.
1. Waxaan ku xisaabtami doonnaa koontadaada iyadoo ku saleysan waxa aan dhab ahaan helnay. Guud ahaan, waxay noqon doontaa xaddiga aad dirtay oo laga jaray khidmadda macaamil ee 'PayPal'.
2. Haddii aad soo dirto USD, markaa waxaan u beddeleynaa RMB oo aan ku deyneynaa koontadaada.